झ्याप्प–झ्याप्पले हैरानी - Pradesh Today झ्याप्प–झ्याप्पले हैरानी - Pradesh Today
जेठ १३, २०७६ जीतसागर जी.एम.
अनियमित विद्युत सेवा …
तुलसीपुर, १३ जेठ । दाङमा केही दिनयता हुने गरेको विद्युत अनियमिताले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । लोडसेडिङ नभए पनि अघोषित लोडसेडिङका कारण उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । अनियमित विद्युतको मारमा दाङसहित रुकुम, रोल्पा र सल्यानका उपभोक्तासमेत समस्यामा छन् ।
गर्मी समयमा विद्युत अनियमित बन्दा सर्वसाधारण नागरिक बढी मारमा परेका छन् भने उद्योग, कलकारखानालगायत विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
‘केही दिन भयो, विद्युत अनियमित भएको छ, लोडसेडिङ पनि छैन् तर झ्याप्प—झ्याप्प जाने विद्युतले घरमा भएका कम्प्युटर, टिभि, फ्रिजलगायतका विद्युतीय उपकरणहरु बिग्रिन थालेका छन्’ तुलसीपुरका रमेश रोकाले भने ।
अघोषित लोडसेडिङका कारण उपभोक्ताहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् भने विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरुमा पनि समस्या आउन थालेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् ।
‘विद्युत कति बेला जान्छ ? कुनै निश्चित नै छन्, विद्युत प्राधिकरणमा फोन ग¥यो, एक त फोन नै उठ्दैन, अर्कोतिर फोन उठिहाल्यो भने सिस्टम गएको छ भन्ने जवाफ मात्रै आउँछ,
‘केही दिन भयो, विद्युत अनियमित भएको छ, लोडसेडिङ पनि छैन् तर झ्याप्प—झ्याप्प जाने विद्युतले घरमा भएका कम्प्युटर, टिभि, फ्रिजलगायतका विद्युतीय उपकरणहरु बिग्रिन थालेका छन्’
महशुल तिर्न एकदिन ढिला भयो भने जरिवाना गर्ने विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमित गराउन सकेको छैन्’ तुलसीपुर–१३ का विरबहादुर बुढाले गुनसो गरे । ‘विद्युत अनियमित हुँदा पानी तान्ने मोटर पनि बिग्रियो, त्यसको जिम्मा के विद्युत प्राधिकरणले लिन्छ त ? उनले प्रश्न गरे ।
हापुरेको १३२ केभिए विद्युत प्रशारण लाइन शुभारम्भ भएसँगै अघोषित लोडसेडिङको अन्त्य हुने आशामा बसेका नागरिक विद्युत नियमित नभएपछि समस्यामा परेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुरका निमित्त प्रमुख पुष्पराज मल्लले केही दिन यता हावाहुरी बढेका कारण केही समस्या देखिएको बताएका छन् । ‘हावाहुरीले समस्या बनाएको थियो,
अब त्यो पनि छैन् हामीले जतिसक्यो विद्युत नियमित बनाउछौँ, सिस्टममा जाने प्रक्रियालाई त रोक्न सकिदैन् तर सकेसम्म अब विद्युत नियमित हुन्छ’ उनले भने ।
निमित्त प्रमुख मल्लले हापुरको ३३ केभिए विद्युत सोनापुर सिमेन्टमा जोडिएको कारण पनि समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको बताए । उनले अब तुलसीपुरबाट सिधै हापुरको विद्युत विस्तार पनि हुने बताए ।
काम अन्तिम चरण पुगेको बताउँदै उनले सिधै हापुरको विद्युत तुलसीपुरमा आउने बताए ।
तुलसीपुर, १२ जेठ । विद्युतको नियमिताको मागसहित नेपाल विद्यार्थी संघ तुलसीपुर नगर समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
नगर समितिले आइतबार विद्युत अनियमिता हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुष्पराज मल्ललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
संघले लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्दा उपभोक्ता समस्यामा परेको जनाएको छ ।
विद्युत अनियमित हुँदा विद्युतीय उपकरणहरु बिग्रने उपभोक्ताले सास्ती पाएकाले विद्युतको नियमितको माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको नेपाल विद्यार्थी संघ तुलसीपुर नगर समितिका संयोजक राजिव पाण्डेले बताए ।
‘हामीले यसअघि पनि विद्युत प्राधिकरणलाई नियमित विद्युतको माग गर्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्ने गरेका छौँ, यसपटक पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, माग सम्बोधन हुनेछ भन्ने आशामा छौँ’ उनले भने ।
नेपाल विद्यार्थी संघ तुलसीपुर नगर समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख पुष्पराज मल्लले हावाहुरीका कारण केही दिन यता विद्युत अनियमित हुने गरेको स्विकार गरे ।
‘हामीहरुबाट त्यस्तो हुँदैन, केन्द्रको सिस्टमका कारण नै विद्युत अनियमित हुने गरेको छ, हामीहरु यसविषयमा गम्भीर छौँ’ उनले भने । उनले हापुरको विद्युत सोनापुर सिमेन्ट हुँदै तुलसीपुरमा जोडिएको बताउँदै अब हापुरे–तुलसीपुर सिधा विद्युत जडान भए समस्या कम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा अनिल कार्की, किरण केसीलगायतले विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुरका सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणमा विद्युत अनियमित हुँदा समस्या पर्ने गरेको र फोन गर्दा पनि फोन नउठ्ने समस्या रहेको भन्दै निमित्त प्रमुख मल्ललाई ध्यानाकर्षण गरे ।
उनीहरुले विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनसमेत माग गरे । कार्यक्रमको सहजीकरण विदुरराज गौतमले गरेका थिए ।